နိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် စတင် ပျက်ပြားလာနေပြီလား? | Mizzima Myanmar News and Insight
နိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် စတင် ပျက်ပြားလာနေပြီလား?
လေကြောင်းကနေ တိုက်ခိုက်တာ၊ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့် ထောင်နဲ့ချီတဲ့ အရပ်သားပြည်သူတွေ သူတို့ရဲ့ နေအိမ်တွေကနေ ထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တွေတုန်းက နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ထားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ချို့ယွင်းချက်အပြစ်အနာအဆာတော်တော်များထားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်စဖို့ နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးပမ်းနေရချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အော်ဟစ်တောင်းဆိုမှုတစ်ရပ် ရှိသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေလျက်ရှိနေသေးတဲ့ ကချင်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာလည်း ဒီအတိုင်းတောင်းဆိုမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က မြစ်ကြီးနားမြို့က ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာဟာ လမ်းတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အော်ဟစ်တောင်းဆိုခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ၊ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအသံတွေကို ဘယ်သူတွေက နားထောင်ပေးနေပါသလဲ?
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်ကဆို ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းကိုင်မြို့ RCSS/SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အတွင်းက မူးယစ်ဆေးဖြတ်စခန်းကို မြန်မာ့တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ပြည်သူ ၂,၀၀၀ ခန့် နေအိမ်တွေကနေ ထွက်ပြေးသွားကြရပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဒေသခံပြည်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ နေအိမ်တွေကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီး မြောက်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ သွားရောက်ခိုလှုံနေကြရပါတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်က လက်နက်ကြီးနဲ့ပါသုံးပြီးတော့ နေရာလေးခုကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ RCSS အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေကတော့ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ အနီးအနားဒေသတွေဖြစ်ကြတဲ့ UWSA ၀ နဲ့ မိုင်းလား ဒေသမှာလည်း UWSA တပ်ဖွဲ့က မိုင်းလားနယ်မြေထဲကို ဝင်ရောက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး UWSA တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆၀၀ လောက်က အချက်အချာကျ တောင်ကုန်းစခန်းနှစ်ခုကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ မီဒီယာသတင်းတွေမှာ ဖော်ပြကြပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်း DKBA-KH အဖွဲ့နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်အကြား တင်းမာမှုတွေ ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေတာကြောင့် ရွာသားဦးရေ ၄,၀၀၀ လောက် ထွက်ပြေးနေရ တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း နောက်ထပ် အပြစ်မဲ့အရပ်သားသေဆုံးမှုတွေ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ KNU အဖွဲ့က ယင်း DKBA အဖွဲ့ကို ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်နဲ့ ပြန်ပေါင်းဖို့ တိုက်တွန်းအကြံပြုထားတာလည်း ရှိပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်း တိုက်လေယာဉ်လေးစင်း လာရောက်တိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီး KIO အဖွဲ့က ပြောကြားထားသလို ယင်းလုပ်ရပ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ ပြန်မစမီ NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့ ဖိအားပေးလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
ခုချိန်မှာ တစ်ဦးတစ်ယောက် (မြန်မာ့တပ်မတော် ဖြစ်နိုင်) ကတော့ အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ ကစားပွဲကို ကစားနေတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာတော့ ခုထက်ထိ ပြီးပြည့်စုံခြင်း မရှိသေးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကို ဘယ်လိုမှ ပျက်ပြားမသွားနိုင်စေရေးအတွက်ကတော့ သက်ဆိုင်သူအားလုံးအနေနဲ့ အလေးအနက်စဉ်းစားပေးဖို့ လိုနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အဲဒီအပေါ်မှာ မူတည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။